Apple debara aha patent maka ID ID na ihuenyo | Akụkọ akụrụngwa
Apple debara aha patent maka ID ID na ihuenyo
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Apple, Mobiles, Noticias
Mmepe nke teknụzụ ọhụụ obere obere obere smartphones na-emejuputa na-aga n'ihu na-eto. Ọ bụ ezie na n'ogo nke ọnụọgụ ndị ọrụ gam akporo ọ bụrụla onye ndu ọtụtụ afọ. Apple anaghị akwụsị na mbọ ya na-eme ka iPhone zuo oke mbipute mgbe ụdị. Ọhụrụ na n'enweghị obi abụọ ọ bụla, na dịka ndị ọrụ si eme ihe, N'oge na-adịbeghị anya ọ na-apụta ìhè site na enweghị ya.
E wezụga mmelite na nhazi, ngwanrọ na igwefoto, e nwere ugbua ọtụtụ nsụgharị nke iPhone enweghị ihe ọ bụla kwesiri ngosi ozi ọma. Nyaahụ Tuesday 17 anyị nwere ike ịmata nke ahụ site na Cupertino a patent metụtara mwekota nke Touch ID na ihuenyo e debara aha. Ma ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọhụụ, ọ bụ ihe nwere ike ịnweta obere ndozi na nsụgharị nke iPhone n'ọdịnihu.
1 ID ihu nwere ike ibikọ ọnụ na Touch ID maka oge mbụ
2 N'okpuru ihuenyo mkpisiaka akara aka na-esote iPhone?
ID ihu nwere ike ibikọ ọnụ na Touch ID maka oge mbụ
Ebe ọ bụ na nhichapụ na iPhone nke ihe omimi na nke omimi bọtịnụ «ụlọ», nsụgharị site na iPhone X ha kwụsịrị ịnwe teknụzụ njirimara akara mkpisiaka. A nche usoro na-arụ ọrụ, ma ka na-arụ ọrụ dị ukwuu na iPhone 8 na mgbe e mesịrị. Site na igwe onyonyo ọhụụ ọ bụla enweghị ohere ịmekọrịta Touch ID.
Mkpebi iwepụ onye na-agụ akara mkpịsị aka emeghị ka iPhone nwekwuo nchebe. Kama, na nke a ma ọ bụrụ na ọ bụ ọganihu, ụdị ọhụrụ ahụ ga-enwe ọdịdị ihu technology akpọ Nje ID. Teknụzụ dị ugbu a nke Apple mere nke ọma ka ọ bụrụ na ọ "agaghị ekwe omume" ịgabiga. Enwere paswọọdụ dị nchebe ma dịkwa mfe karị icheta karịa ihu nke anyị?
Eziokwu bụ na ọ bụ ezie NJI ihu na-amasị ọtụtụ, na dị ka anyị na-ekwu na ọ bụ nnukwu ọganihu, e nwere ndị si na mbụ oge ha ekweghị akara mkpisiaka. N’ọnọdụ ụfọdụ dị ala ma ọ bụ ọnọdụ onyinyo, ọdịdị ihu pụrụ ịda. Ihe anaghị eme na mkpisiaka agụ. Ya mere, ruo afọ ụfọdụ, kemgbe Apple na-arụ ọrụ na ijikọ Touch ID na ihuenyo.
N'okpuru ihuenyo mkpisiaka akara aka na-esote iPhone?
Anyị enweela ike ịhụ karịa afọ ole otu Apple "nara" teknụzụ dị ugbu a ma melite ha na nke ya. Ihe omuma atu doro anya nke a bu Nweta onwe ya. Achọpụtala ihu ihu na ngwaọrụ tupu Apple emejuputa ya na iPhone X. Y jisiri ike melite ya ọ bụghị naanị na-ese naanị foto nke ihu anyị, kama na-eme nkewa zuru oke nke ihu anyi ruo 180º x 180º.
Otu ihe ahụ ọ ga - eme na ID Touch wuru na ihuenyo ahụ? Anyị na-ahụ otú ugbu a, ngwaọrụ dị ka Samsung S10 etinyelarị ya. Ọ bụ ezie na iji arụ ọrụ dịtụ mma, ọgụgụ ya nwere oke mpaghara ụfọdụ nke ngwaọrụ ahụ. Sourcesfọdụ akwụkwọ kwuru na esote iPhone ga-enwe ike ịgụ mkpịsị aka anyị n'ebe ọ bụla na ihuenyo. Ka o sina dị, dị ka Apple anaghị ekpughe data na patent ya, anyị ga-echere ruo mgbe iPhone 12 bụ eziokwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Apple » Apple debara aha patent maka ID ID na ihuenyo
Etu esi etinye ma hazie Google Home
Oge nke ojuju na Bitcoin, oge itinye ego?